Ivory Coasta oo u soo baxday Fiinalaha Koobka Qaramada Afrika | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Ivory Coasta oo u soo baxday Fiinalaha Koobka Qaramada Afrika
Ivory Coasta oo u soo baxday Fiinalaha Koobka Qaramada Afrika
Xulka qaranka Ivory Coast ayaa iska xaadiriyay finalka koobka qaramada Afrika ee 2015 kadib markii ay guul muhiim ah ka gaadheen xulka qaranka DR Congo.Ivory Coast ayaa guushan ku gaadhay 3:1 waxaana goolasha u kala dhaliyay Yaya Toure, Gervinho iyo W. Kanon. Ivory Coast ayaa finka ku sugi doonta xulka ka soo baxa Ghana iyo Equatorial Guinea oo ah xulka qaranka koobkan marti galinaya.
Xulalka qaramaada DR Congo iyo Ivory Coast ayaa iskaga hor yimid kulanka wareega afar dhamaadka ee koobka qaramada Afrika. Labadan xul qaran ayaa doonayay inay u soo baxaan finalka koobka qaramada Afrika ee 2015.
Kulankan ayaa ahaa kulan adag oo xamaasad badan isla markaan ay labada xulba ku doonayeen inay guulaystaan oo ay u soo baxaan finalka koobka qaramada Afrika, waxayna ciyaarta ku bilawdeen qaab dardar ah.Daqiiqadii 21 aad ayuu Yaya Touré xulka qarankiisa Ivory Coast udhaliyay goolka furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Ivory Coast hogaanka kula wareegtay. Kubbad uu caawinteeda iska lahaa Wilfiried Bony ayuu Toure ku dhaliyay gool gantaal ah.
Daqiiqadii 23 aad ayaa DR Congo loo dhigay rekoodhe kadi markii uu difaaca Ivory Coast ee Bailly uu isaga oo xerada ganaaxiisa ku jira uu kubbada gacan ku taabtay.Mbokani ayaana rekoodhaas DR Congo gool ugu badalay wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah.
Ivory Coast ayaa markale dadaal u gashay sidii ay hogaanka u soo ceshan lahayd, waxaana daqiiqadii 41 aad goolka labaad udhaliyay Gervinho, kaas oo markiisa ciyaarta ka dhigay 2:1 ah Ivory Coast hogaanka markale kula wareegtay. Markale ayuu Bony caawiye ka ahaa goolka xulka qarankiisa Ivory Coast halka uu kulankii horena laba gool udhaliyay.qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay 2:1 ay Ivory Coast hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Ivory Coast halkii ka sii waday qaab ciyaareedkii fiicnaa ee ay soo bandhigtay qaybtii hore ee ciyaarta, waxayna goolka saddexaad ee kalsoonida la timid daqiiqadii 68 aad waxaana goolkaas udhaliyay W. Kanon kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:1 oo ay Ivory Coast hogaanka ugu raaxaysanayso.ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Ivory Coast guul ku gaadhay isla markaan ay ugu soo baxday finalka koobka qaramada Afrika ee 2015.